ခေါက်ဆွဲအွန်…. (ရှမ်းအစားအစာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ခေါက်ဆွဲအွန်…. (ရှမ်းအစားအစာ)
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 15, 2011 in Food, Drink & Recipes |4comments
အရင်ဆုံး… ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲဖတ် သူက မလှီးရသေးတဲ့ ဆန်ပြားပါ
ပြီးရင် ကြက်သားကို တောက်တောက်စင်းထား
အရင်ဆုံး… ဆီအရင်တည်…ဆီပူလာရင် အရောင်တင်မှုန့်ထည့်… ပြီးရင် ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးထားတာကိုဆီသတ် နီလာရင် ခရမ်းချဉ်သီ တောက်တောက်စင်းထားတာကိုထည့် … ခရမ်းချဉ်အနှစ် ကျက်လောက်ရင် ပါးကောလို့ ခေါ်တဲ့ တရုတ် မာဆာထည့် .ပြီးရင် ခစနေက ကြက်သားထည့်ပြီး ရောပြီးဆီသတ်ပါ ….
ဆား အချိုမှုန့် လိုအပ်သလို ထည့်ပြီးရင် ခဏနေက ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲ အပြားထဲ ထည့်ပြီးလိပ်ပါ …. ပြီးရင် အောက်ကနေ ဆလပ်ရွက်ခံပြီး ိပ်ထားတဲ့ အလိပ်လေးကို ထမင်းလိပ် ကိုလှီးသလို အပိုင်းပိုင်းတွေလုပ်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါတယ်
ဆီအများကြီးမထည့်ပဲ အနေတော် အခြောက်လုပ်မှ စားကောင်းမှာပါ
ဖြစ်နိုင်ရင် ကြက်သားကို ရောကြော်လိုက် သလို ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ
ဒါမှ ပိုပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ခေါက်ဆွဲအွန်ကို ရရှိမှာပါ
ပြီးရင်တော့ ဆန်ချိုအေးအေးလေးနဲ့ ရောစားရင်တော့ တော်တော် အရသာရှိလှတဲ့
ရှမ်းအစားအစာ တခွက်ကို ရရှိမှာပါ
ဆလပ်ရွက် ကို ဆန်ပြားပေါ်ခင်းပြီး အဲဒီအပေါ်ကိုမှ ချက်ထားတဲ့အဆာကိုထည့်ပြီး လိပ်တာလား။ ဆလပ်ရွက်ထည့်ပုံကို ပြောထားတာ သိပ်မရှင်းလို့။
ဆန်ချိုအေးအေးလေးနဲ့ စားရမယ်ဆိုတော့ ဆန်ချိုဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ထပ်တင်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်နော်။
ဒီမှာရှိတဲ့ တရုတ်အသံထွက်( ရှောက်ရှိဖန်) နဲ့တူတယ်…ဆန်ပြားရော…အစာသွပ်ပုံပါ၊ပုဇွန်နဲ့လည်းရတယ်…ချီလီဆောစ့်တစ်မျိုးစမ်းပီးစားပါတယ်..ဆန်ပြားကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပါတယ်…ကျနော့်တော့ကြိုက်တယ်…မြန်မာပြည်ကကော်ပြန့်စိမ်းနဲ့တူလို့…
ကျနော်က စားရုံသက်သက် ……………….
ဆန်ချိုအေးက လှော်စာပုံစံမျိုးပါပဲ … ဒါပေမယ့်သူက လှော်စာလို ချဉ်စုတ်စုတ်အရသာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး .. ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ သောက်လို့ကောင်းပါတယ် … သံပုရာသီးလေး တစ်စိတ်လောက် ညှစ်ထည့်ပြီးသောက်ရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ် … လုပ်နည်းကတော့ မသိပါဘူး။